हिट हुने कहिले ? - मनोरञ्जन - नेपाल
हिट हुने कहिले ?
सन्ध्या केसीको डेब्यु फिल्म हो, ड्रिम्स । हिट भए पनि जस सन्ध्याले पटक्कै पाइनन् । सहायक भूमिकामा सीमित जो थिइन् । त्यसपछि उनको मुख्य भूमिका रहेको ह्याप्पी न्यु इयर प्रदर्शन भयो । सुटिङ गर्न अस्ट्रेलिया पुगिन् । तर, बिनाप्रमोसन प्रदर्शन भएको यस फिल्मले सुरुआती दिनबाटै दर्शकको खडेरी झेल्नुपर्‍यो । पण्डित बाजेको लौरीबाट सन्ध्याको अभिनयले धेरथोर प्रशंसा कमायो । तर, बक्स अफिसमा चिप्लियो । यही नियतिलाई निरन्तरता दिएको छ, कथा काठमाडौँले । कमजोर व्यापार गरेको यस फिल्ममा प्रियंका कार्कीको छायामा परिन्, सन्ध्या । अर्थात्, चार फिल्म रिलिज भए पनि ‘मार्क’ हुन सकेकी छैनन् । बाँकी एउटा फिल्म कमलेको बिहेको रिलिज पत्तो छैन । क्या फसाद !